Moments Neshamwari 26
Mweya unoshanda nemunhu uye chii chiri chemweya?
Tinofanira kubvunza mubvunzo isu tisati tapindura. Vashoma vanhu vanomira kuti vafunge zvavanoreva pavanoshandisa mazwi akadai semweya uye pamweya. Kana dudziro dzichidikanwa kuvanhu ava pane vashoma vaisazonzwa kusaziva kwavo zvinoreva zvirevo. Kune nyonganiso yakawanda mukereke sezvazviri kunze kwayo. Vanhu vanotaura pamusoro pemweya yakanaka nemweya yakaipa, mweya yehungwara nemweya yebenzi. Iko kunonzi kune mweya waMwari, mweya wemunhu, mweya wedhimoni. Ipapo kune mweya yakawanda yezvisikwa, yakadai semweya wemhepo, wemvura, wepasi, wemoto, uye mweya unonzi kune doro. Chero mhuka yakagadzirwa ine mumwe mweya uye mamwe magwaro anotaura nezvemamwe mweya kutora mhuka. Ikereke inozivikanwa seMweya, kana yekuita Zvemidzimu, inotaura nezvemweya yekuchengetedza, mweya yemidzimu uye nyika yemweya. Anoda zvinhu anoramba kuti kune chero mweya. Iwo chinamato chinozivikanwa seChristian Science, chichiita rusununguko kushandiswa kwetemu, chinowedzera mukuvhiringidzika uye chinoshandisa nekuchinjika zviri nyore. Iko hakuna kubvumirana kuti mweya ndechipi kana chinzvimbo chipi kana kunaka kweshoko remweya rinoshanda kwariri. Kana izwi remweya parinoshandiswa, kazhinji kutaura, rakagadzirirwa kuvhara hunhu, hunhu uye mamiriro ezvinhu anofanirwa kunge asiri ezvemuviri, kwete zvekushandisa, kwete epanyika. Saka tinonzwa nezverima remweya, Chiedza chemweya, mufaro wemweya, uye kusuwa kwemweya. Imwe inoudzwa kuti vanhu vaona mifananidzo yemweya; mumwe anonzwa nezvevanhu veMweya, kutaura kwemweya, manzwiro emweya uye kunyangwe yemweya manzwiro. Iko hakuna parinogumira pakuzadzikiswa mukushandiswa kwemashoko mazwi pamweya. Kuvhiringidzika kwakadai kucharamba kuchingoenderera mberi sekudaro vanhu vachiramba kufunga chaiko kwezvavanoreva kana zvavanoreva mumitauro yavo. Isu tinofanirwa kushandisa mazwi akasarudzika kumiririra pfungwa dzakajeka, kuitira kuti ipapo mazano ane chokwadi azivikanwe. Chete nesaruro yechokwadi yesumoyo isu tinotarisira kuchinjana maonero neumwe uye kuwana nzira kuburikidza nekuvhiringidzika kwepfungwa kwemazwi. Mhepo ndiyo yekutanga uye zvakare yekupedzisira mamiriro, mhando, kana chimiro, chezvinhu zvese zvinoratidzwa. Iyi yekutanga uye yekupedzisira nyika iri kure nekubviswa pakuongorora kwemuviri. Iyo haigone kuratidzwa nekuongororwa kwemakemikari, asi inogona kuratidzwa kune pfungwa. Izvo hazvigone kuonwa nachiremba wefizikisi, kana neye chemistake, nekuti zviridzwa zvavo nemaedzo hazvizopindure, uye nekuti izvi hazvisi mundege imwechete. Asi zvinogona kuve zvinoratidzwa kune pfungwa nekuti pfungwa ndedzeya ndege uye inogona kuenda kune iyo mamiriro. Pfungwa dzinoenderana nemweya uye vanogona kuzviziva. Iwoyu mweya ndiyo inotanga kufamba uye kuita kunze kwemubereki chinhu. Chinhu chevabereki chemweya hachiite, chinoita chisingafambi, chinongogumira, chinoita basa uye homo native, chengetedza kana chikamu chega chichibva pachako chipfuura nepakati pechiratidziro chinonzi chakazvimirira uye nekushanduka-shanduka, uye chengeta kana icho chikamu icho chaenda chadzokera mumubereki wavo. chinhu. Pakati pekuenda nekudzoka chinhu chemubereki hachisi sezvakatsanangurwa pamusoro apa.
Chinhu ichi kana chakabuditswa hachisisiri chinhu, asi chiri chinhu uye chakafanana nemoto mukuru, gungwa risina kana kutenderera murunyararo, yese ichigadzirwa. Chikamu chimwe nechimwe, sezvakaita zvese, chine huviri mune zvahwo uye chisingawonekwe. Inyaya yemweya. Kunyangwe chidimbu chega chega chingaite uye chinofanira kupfuura nepasirese mamiriro uye mamiriro, asi hachikwanise nenzira chero ipi zvayo kana neimwe nzira kutemwa, kuparadzaniswa kana kukamurwa pachako. Ichi chimiro chekutanga chinodaidzwa kuti cheMweya uye kunyangwe chiri chechimiro, asi chisinga patsanurike, chinhu chemweya chinogona kunzi mweya uchiri mune ino yekutanga kana yemweya mamiriro, nekuti mumweya wakazara.
Kutevera hurongwa hwakajairika hwekuenda panomira kana kuratidzwa mune iyi yakasarudzika, yemweya kana yepfungwa, nyaya yacho inopinda muchikamu chechipiri uye chakaderera. Mune ino yechipiri mamiriro ezvinhu akasiyana pane ekutanga. Kunaka kuri kuita nyaya iko zvino kwaratidza pachena. Chero chechikara hachichionekizve chinofamba kunze kwekushora. Chero chinhu chimwe nechimwe chinongozvifambisa, asi chinosangana nekuzvidzivirira pachako. Chikamu chimwe nechimwe mukudyara kwayo chakagadzirwa neicho chinofamba uye icho chinofambiswa, uye kunyangwe chakabatana muchimiro chazvo, izvo zvinhu zviviri zvakabatana seimwe. Imwe neimwe inosarudzira chinangwa kune mumwe. Izvo zvinhu izvozvi zvinogona kunzi nemweya chinhu, uye mamiriro mune icho mweya-chinhu chinogona kunzi hupenyu hwepamoyo-yemweya. Chero chinhu chiri mudunhu iri kunyangwe chinonzi mweya-chinhu chinotongwa uye chinotongwa neicho icho, iwo uri mweya, uye mweya uri mukati mechikamu chimwe nechimwe chezvinhu zvemweya zvinomirira chimwe chikamu kana chimiro chaicho icho chiri chinhu. Mune hupenyu hwehupenyu hwezvomweya-mweya, mweya uchiri chinhu chinogonesa. Sezvo zvimedu zvezvinhu zvemweya zvinoramba zvichienderera nekuratidzwa kana kushungurudzika ivo vanoremerwa uye vachiteerera uye vachinonoka mukufamba kwavo kusvikira vapinda mune fomu yenyika. Mune fomu inotaura izvo zvimedu zvaive zvakasununguka, zvichizvifambisa, uye zvisingagone kushanda zvino zvadzoreredzwa mukufamba kwavo. Kudzosera kumashure uku imhaka yekuti nyaya yechikamu iri kukurudzira mweya yemukati wechikamu uye nekuda kwekuti chidimbu chinowirirana neyakagadzika uye kuburikidza nezvose, inyaya yemasisitimu anotonga mweya yavo yemweya. Sezvo chidimbu chinomhanya uye chichibatanidzwa netaipi, vachiita denser uye denser, ivo vanosvika pakuuya kumuganhu wenyika yepanyama uye nyaya yacho iri ipapo mukati mekusvika kwesainzi. Sezvo chemistista paanoona mavara akasiyana kana nzira dzenyaya ivo vanozvipa zita rechinhu; uye saka tinowana izvo zvinhu, zvese izvo zvine basa. Chinhu chega chega chinosanganiswa nevamwe uncer mimwe mitemo, makomendi, precipitates uye inocherwa kana yakaiswa mukati sechinhu chakasimba chakatikomberedza.
Kune zvisikwa zvepanyama, zvisikwa zvezvisikwa, zvisikwa zvehupenyu, uye zvisikwa zvemweya. Maumbirwo enyama yemuviri ndeemaseru; zvinhu zvinoumbwa nemamorekuru; zvisikwa zvehupenyu zviri maatomu; zvisikwa zvemweya ndezvemweya. Makemikari anokwanisa kuongorora hutano nekuedza neyenyaya, asi haasati apinda mudenga remweya-mweya kunze kwekunyepedzera. Munhu haakwanise kuona kana kunzwa hupenyu hwese kana chisikwa chemweya. Munhu anoona kana kunzwa izvo izvo zvakabatanidzwa. Zvinhu zvepanyama zvinosanganisirwa kuburikidza nemanzwiro. Izvo zvinhu zvinonzwika kuburikidza nemanzwisiso anopindirana kwavari. Kuti uone chinhu chemweya- kana zvisikwa zvezvinhu zvemweya, pfungwa dzinofanirwa kugona kufamba zvakasununguka mukati mayo kunze kwemanzwiro ayo. Kana iyo pfungwa inogona kufamba yakasununguka pasina kushandisa kwayo kwadzinogona kuona zvinhu zvemweya uye zvisikwa zvehupenyu. Kana pfungwa dzichinge dzagona kuzviona dzinozogona kuziva zvisikwa zvemweya. Asi zvisikwa zvemweya kana izvo zvipenyu zviriko zvinozivikanwa hazvisi uye hazvigone kuve izvo zvisikwa zvekunzwa zvisina miviri yemuviri, izvo zvisina hanya uye nekusaita zvakanaka zvinonzi midzimu kana zvisikwa zvemweya, uye izvo zvinoshuva uye kuchiva kwenyama. Iwo mweya unoshanda nemurume muchikamu sezvo murume anosvika pakufunga kwake kune mamiriro emweya. Izvi anozviita nemafungiro ake. Munhu ari muchikamu chake chepamusoro munhu wemweya. Muchikamu chake chepfungwa iye ari kufunga. Zvino mune chake chishuwo iye ari mhuka. Isu tinomuziva semuviri wenyama, kubudikidza naye watinowanzoona mhuka, kazhinji tinosangana neanofunga, uye panguva dzisingawanzo tinomuona saiye wemweya.
Semunhu wemweya murume huwandu hwekushanduka-shanduka, wekutanga uye wekupedzisira kuratidzwa uye mhedzisiro yekushanduka-shanduka. Omweya pakutanga kwekuvhurika kana kuratidzwa hakuoneki.
Sezvo chinhu chikuru chemweya chinobatanidza zvishoma nezvishoma, nhanho neyakaitika, kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe nyika, uye pakupedzisira icho chaive chinhu chekunamata chinobatwa muhusungwa nekusungwa nerimwe divi rechisiko ichocho chinhu, saka mweya zvishoma nezvishoma, nhanho nhanho, inosimbisa hukuru hwayo pamusoro payo pachayo, uye, ichikunda kupokana kwechinhu ichocho, pakupedzisira anodzikunura icho chinhu nhanho nhanho kubva munyama yakanyanya, kuburikidza nenyika yekuda, nematanho akareba ekupedzisira kusvika nyika kufunga; kubva pachinhanho ichi chinokwira nekwakananga kuzere kwekupedzisira kuzadzisa uye nekuwana nyika yemweya, iyo zivo, iyo inozvivazve iyo uye inozviziva iyo pachayo mushure mekugara kwayo kwenguva refu mukati meguva rezvinhu nemanzwiro.